नेपाल आज | चोलेन्द्रसँग सेटिङ्ग नमिलेपछि सर्वोच्चमा आन्दोलन, यस्तो छ नालिवेली
बुधबार, १७ कार्तिक २०७८ गते प्रकाशित - नेपाल आज
प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आचारण विपरित काम गरेको आरोप लगाउँदै यतिवेला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशहरु आन्दोलनमा छन् । नेपाल वार एसोसिएसन दिनदिनै आन्दोलनका कार्यक्रम गरिरहेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता भनिएका शम्भु थापाले प्रधानन्यायाधिश जबराले राजिनामा नदिएसम्म वहस गर्नै नजाने घोषणा गरेका छन् । अर्कोतर्फ प्रधानन्यायाधिश जबरा पनि ‘टसमस’ भएका छैनन्। सडकमा राजिनामा माग्दैमा राजिनामा नदिने वरु महाअभियोग फेस गर्ने भन्दै उनले सवैलाई चुनौती दिईसकेका छन् ।
यो समस्या वढ्दै जाँदा न्यायालयमा देखिएका समस्या एकपछि अर्को गर्दै वाहिर आउन थालेका छन् भने न्यायायाधिश र वकिलहरुमाथि वेला वखत लाग्दै आएका अनियमितता र गैरसंवैधानिक कृयाकलापका आरोप पुष्टि हुँदै गएका छन् ।
केही समय अघि इटहरी नगरपालिकाका मेयर द्वारिका चौधरीले ‘न्यायाधिशहरु कोठीमा भेटिन्छन्’ भन्दै एउटा अन्तरवार्ता दिए । त्यस विरुद्ध न्यायाधिशहरुले नत प्रतिवाद गर्न सके नत सफाई नै दिन सके ।
यति मात्र होईन, भगवानका रुपमा मानिएका न्यायाधिश तथा कालो कोट लगाएर संविधानको रक्षा गर्न वसेका वकिलहरुको कर्तुत वुझन् केही समय अगाडि फर्कनु जरुरी छ। वरिष्ठ अधिवक्ता (धुरन्धर वकिल) शम्भु थापा, जसलाई वकिल मात्र होईन हरेक न्यायाधिशको नारी छामेका एक मात्र वकिलको रुपमा लिईन्छ। उनले कान्तिपुर टेलिभिजनमा एउटा अन्तरवार्ता दिए ।
अन्तरवार्तामा उनले ‘न्यायाधिशहरु घुस खान्छन्, हामी खुवाउँछौं’ भन्दै संसारलाई आश्चर्य चकित पारे । उनले भनेका छन् –‘न्यायाधिश घुस खान्छन, वकिल घुस खुवाउँछन्, हामी घुस खुवाउँछौं, झगडियाले घुस खुवाउँछन् । कति खान्छन् भन्ने हुँदैन। दलालहरु विभिन्न किसिमले राखेका हुन्छन् । मेरो पालामा (नेपाल वार एसोसिएसनको अध्यक्ष) त न्यायाधिशले रिसवत खाएर फैसला गर्यो भनेको एउटा मुद्दा वारले जाँचै गर्यो नी । त्यो मुद्दा लागु औषधको, रविन्सनको मुद्दा । नेपालमा पहिलो पटक घुस खाएर फैसला गरियो भनिएको मुद्दा हामीले जाँचै गर्यौ नी।’
क–कस्ले कती–कती खान्छन् ? भन्ने प्रश्नमा उनले भनेका छन्–‘तपाईलाई मैले यो टिभीवाट भने भने यो टिभी (कान्तिपुर टेलिभिजन) पनि हिड्छ, तपाई पनि हिड्नु हुन्छ। केही नियमहरु संयमता भित्र वस्नु पर्छ ।’
उनले आवश्यक्ता परेको ठाउँमा आफुले न्यायाधिशको नाम, मुद्दा र घुसको रकम समेत उपलब्ध गराउने वताएका थिए । ‘शम्भु थापाले नाम दिन्छ, शम्भु थापाले मुद्दा पनि दिन्छ, रकम पनि भन्दिन्छ। तपाईले जुन ठाउँमा कारवाही गराउने हो त्यो ठाउँमा तपाई भन्नोस।’– उनले भनेका छन् ।
थापाको यत्ति भनाईवाट अहिले न्यायालयमा देखिएको समस्याका विषयमा अनुमान लगाउँन सकिन्छ। अहिले प्रधानन्यायाधिशको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने नत न्यायाधिश दुधले धोएका छन्, नत वकिलहरु नै न्यायालय सुधारको पक्षमा छन् ।
अहिलेको आन्दोलन न्यायालय सुधारका लागि भन्दा पनि आ–आफनो स्वार्थ पुरा गर्ने र आफु सुरक्षित हुने मनसायवाट प्ररित भएको केही स्वतन्त्र वकिलहरु नै वताउँछन् । ‘न्यायालय सुधार्न कसैले चाहेको छैन। विचौलिया आफनो ठाउँमा, चोलेन्द्र आफना ठाउँमा सफा र सुरक्षित हुन चाहान्छन्। अहिलेका आन्दोलनरत न्यायाधिशहरु आ–आफनो स्वार्थका लागि आन्दोलन गरिरहेका छन्’ एक वकिल भन्छन्–‘यदि यिनीहरुले न्यायालय सुद्धिकरण चाहेको हो भने आन्दोलन गर्ने न्यायाधिशहरुले चोलेन्द्रलाई वुँदागत रुपमा मिति तोकेर आफना मागहरु राख्नु पथ्र्यो । त्यसपछि राजिनामा माग्ने, अथवा संसदलाई सामुहिक रुपमा लेखेर महाअधियोग लगाउ भनेर भन्न सकिन्यो।’
उनले बरिष्ठ भनाउँने वकिलहरुनै पैसाको अनुपातमा फैसला आए हुने भन्ने पक्षमा रहेको पनि वताए । ‘रमण श्रेष्ठले पैसा खाएर पनि सोही अनुसारको फैसला गरेको भए त एक किसिमको न्याय नै पथ्र्यो भन्दै अभिब्यक्ति दिए’ उनले भने–‘यी ठुला भनाउँदा वकिल पनि सुरक्षित विचौलिया हुन खोजेका छन् । पुर्वप्रधानन्यायाधिशको पनि आफनो इन्ट्रेस्ट छ। वकिलहरुको पनि आफनो इन्टे्स्ट हो। न्यायालय सुधारमा कोही लागेका होईनन्। त्यसैले उनीहरु कसैलाई मान्यता दिन हुँदैन, तेस्रो धार निकाल्नु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।’
किन हुँदैछ आन्दोलन ?
पछिल्लो समय न्यायालय विवादित हुँदै गएको छ। सर्वोच्च अदालतलटवाट हुने फैसला समेत विवादित हुने गरेका छन् । देशका प्रधानम्त्री भईसकेका केपी शर्मा ओली, शेरवहादुर देउवा, पुस्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समेत अदालतमा सेटिङ्ग हुने गरेको र न्यायाधिशहरुले आफु अनुकुल फैसला गर्ने कुरामा स्पष्ट छन् । उनीहरुको अभिब्यक्तिवाट यो कुरा वुझन समस्या पर्दैन।
यी यावत कुराले न्यायालय पैसा र पावरमा चल्छ भन्ने कुरामा द्विविधा पालिरहुन पर्ने आवश्यक्ता छैन। वहालवाला प्रधानन्यायाधिश, न्यायाधिशहरु, पूर्वप्रधानन्यायाधिश समाज तथा केही ठेकेदार प्रवृत्तिका वकिलहरुको सेटिङ्गमा अदालतमा मुद्दा हारजित हुने गरेको वकिलहरु नै स्विकार्छन।
वरिष्ठ अधिवक्ता वालकृष्ण न्यौपानेका अनुसार चोलेन्द्रशमशेर प्रधानन्यायाधिश भईसकेपछि अन्य सेटिङ्गवालाको जोर नचल्दा यो समस्या देखिएको हो।सेण्डिकेट लगाउन खोज्ने कतिपय पूर्वप्रधानन्यायाधिश, न्यायाधिश र वरिष्ठ अधिवक्ताहरुका कारण समस्या सुरु भएको उनको भनाई छ।
‘मैले अदालतमा एउटा समस्या के देखिरहेको छु भने यो रामशाहपथको जुन सर्वोच्च अदालत छ, त्यो भन्दा शक्तिशाली सर्वोच्च अदालत कुपण्डोलमा छ। कुपण्डोलमा एउटा सर्वोच्च अदालत छ, अदृष्य अड्डा छ। न्यायसँग सम्वन्धित मान्छेले लगभग अनुमान लगाउन सक्छन’ उनी भन्छन्–‘त्यहाँवाट न्यायाधिश पनि नियुक्त हुन्छन् । त्यहाँवाट मुद्दाका फैसला पनि हुन्छन्, त्यहाँ वक्तब्य पनि जारी गरिन्छ। त्यसको समस्या हो यो । वहाँले (चोलेन्द्रशमशेर जबरा) त्यो कुपण्डोलको अदालतलाई चित्त वुझाउन सक्नु भएन।’
उनको यो भनाई पूर्वप्रधानन्यायाधिश समाजप्रति लक्षित छ ।
अर्कोतर्फ शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठलगायतका आधा दर्जन वकिलहरुका कारण पनि अहिलेको समस्या देखा परेको हो । यी वकिलहरुको महिनाकै कमाई ३/४ करोड रहेको जानकारहरु वताउँछन् । न्यायाधीशहरुसँग उनीहरुको सेटिङ छ। उनीहरु सर्वोच्च अदालतका ठेकेदार जस्तै हुन्। यो कुरा शम्भु थापाको अन्तरवार्ताले पनि पुष्टि गर्छ ।
चोलेन्द्र प्रधानन्यायाधिश भएपछि उनीहरुको यो सेटिङ्ग भत्किएको छ। त्यसैले आफू अनुकूल प्रधानन्यायाधिश नियुक्ति गर्न उनीहरु आन्दोलनमा लागेको स्रोतको दावी छ। यी वकिलहरुलाई अदालतका माफियाका रुपमा चिन्ने गरिएको छ।
जानकारहरुका अनुसार अहिले न्यायाधीशहरुलाई उचाल्ने काम यीनै वकिलहरुले गरिरहेका छन् । ठेकेदार प्रवृत्तिका वकिलहरुले आफनो कमाईका निम्ति अदालत डामाडोल पारेको वताईन्छ।